अझै अनशनमा नै डा. केसी, प्रधानन्यायाधीश पराजुली कहाँ के गर्दैछन् ? - bisalchautari.com
अझै अनशनमा नै डा. केसी, प्रधानन्यायाधीश पराजुली कहाँ के गर्दैछन् ?
What is Pradhaniya Parash Parajuli?
काठमाडौँ ,२०७४ पुस २८ शुक्रबार । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि तारेखमा रिहा भएका डाक्टर गोविन्द केसीले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डा। गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले राजीनामा नदिएसम्म अनसन नतोड्ने अडान लिएका छन् । पराजुली भने थपिएको नयाँ जिल्ला रुकुम पश्चिममा जिल्ला अदालतको नयाँ भवन उद्घाटन गर्न पुगेका छन्।
शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश पराजुली रुकुम पुगेका हुन्। पराजुलीसँगै कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी, कायम मुकायम रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय र न्याय परिषद्का सचिव राजन भट्टराई रुकुम पुगेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको टोली शुक्रबार नै काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ।